Iza moa i Maude Apatow? Iza no mampiaraka? - Fitiavana
Iza moa i Maude Apatow? Iza no mampiaraka?
Angus Cloud sy Maude Apatow, izay tafiditra ao amin'ny sarimihetsika Euphoria, dia mety hamarana ny fifankatiavan'izy ireo eo amin'ny efijery.
Araka ny tati-baovao, ireo mpiara-miasa - izay maneho fitiavana amin'ny tantara HBO - dia hita niara-nisakafo akaiky tamin'ny namana tao New York City, izay nandoro ny afon'ny fanombantombanana momba ny fifandraisana vao haingana.
Angus dia mpilalao malaza amin'ny andiany, izay tarihin'i Zendaya. Ilay talenta vao misondrotra 23 taona dia nandray ny andraikitry ny mpivarotra heroin'i Rue, Fezco, izay nanomboka naneho fitiavana ny toetran'i Maude, Lexi, rehefa nandeha ny tantara.
Nandany fotoana betsaka teo amin’ny fiainana tena izy izy mirahalahy, ka nahatonga ny mpankafy sasany hanontany tena raha miaraka izy ireo.
Nosamborina nandritra ny sakafo hariva i Angus sy Maude, izay samy 24 taona, ny faran’ny herinandro teo. Araka ny tati-baovao voaray dia tao amin’ny Raoul’s, trano fisakafoanana mihaja ao New York City no nisakafoan’izy mivady. Vavolombelona maromaro no naka sary ireo kintan'ny Euphoria, izay hita fa milamina tsara raha nipetraka teo akaikin'ny latabatra niaraka tamin'ny namana maromaro, araka ny sary.
Nampitandrina ny tranokalan'ny kolontsaina pop Deuxmoi ny ao anatiny momba ny fahitana, izay nohamafisin'izy ireo. Ity loharanom-baovao feno hafanam-po ity dia nilaza tamin'ny gazety fa nipetraka teo akaikin'i Maude Apatow sy Fez tao amin'ny Raoul's izy androany alina! Nanome fanamafisana sary mihitsy aza izy.
Ny lamosin'i Fez (Angus Cloud), dia nivazivazy izy ireo, nanondro ny sary nalain'izy ireo talohan'ny nanambarany hoe: Napetrany teo ambonin'ny radiso daholo ny palitao sy ny saron-dohany rehefa nipetraka izy, izay hitan'izy ireo fa mahatsikaiky.
Mbola natolotry ny tao anatiny ihany ilay dite.
Niaraka tamina andiana olona folo teo ho eo izy ireo, araka ny fanazavany hatrany. Samy nahafinaritra izy ireo ary nahafinaritra ny naka sary niaraka tamin'ny hafa. Ny mpandinika iray hafa dia nanamarika fa i Angus sy Maude dia toa tao anatin'ny fifandraisana tena izy ihany koa, nilaza tamin'i Deuxmoi fa milamina sy akaiky izy ireo.
Nivondrona ireo mpankafy haneho ny fanohanany ny mpivady, izay nivoatra haingana ho Flexi ny anaran'ny mpivady. Vao haingana i Maude dia nanambara ny fandraisana tsara ny tantaram-pitiavana tsy mahazatra nataon'ny duo tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i E! Online.
Nandritra ny resadresaka an-telefaona lava tamin'i [Euphoria mpamorona] Sam [Levinson], rehefa niresaka momba izany rehetra izany nandritra ny ora maro izahay, dia toy izany no nitranga. Tsy azoko antoka hoe inona marina no zava-nitranga, saingy tadidiko ny nahatsapa ho maivamaivana. Raha vao nanomboka niresaka momba izany izahay, dia nanomboka nisy dikany taminay izany Niresaka tamin'ny Entertainment Weekly momba ny zavatra niainany izy.
Nanohy nilaza izao manaraka izao momba ny fifandraisany amin'i Angus i Maude: Amin'ny fiainana tena izy, manana finamanana hafahafa izaho sy i Angus izay mendrika ho lazaina. Tao anatin’ny segondra vitsy no nitrangan’izany rehetra izany. Raha vao nanomboka niresaka momba izany izahay dia toa nisy dikany ny zava-drehetra.
Raha toa ka mahazatra i Maude, dia noho izy avy amin'ny fianakaviana Apatow fanta-daza. Ny rainy, Judd Apatow, dia talen'ny sarimihetsika mahatsikaiky toy ny The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, This Is 40, sy ny hafa.
Ny reniny dia Leslie Mann, izay efa niseho tamin'ny saika ny sarimihetsika rehetra. Judd dia nisafidy ny hitazona ny zava-drehetra ao amin'ny fianakaviana. Maude sy Iris zandriny vavy, dia nanao fampisehoana an-tsary tamin'ny sarimihetsika maro an'i Judd, matetika niaraka tamin'ny reniny.
Rob Kardashian dia mampiaraka amin'ny modely Instagram
Ny Fitiavana dia Kintana Jamba Ny fiampangana an'i Natalie Lee Fifandraisana amin'i Sal Perez, mpiara-miasa dia nolavina
Inona no nitranga tamin'i Nick sy Danielle rehefa jamba ny fitiavana?
Iza moa i Maude Apatow?
Maude Apatow dia mpilalao sarimihetsika mizaka ny zom-pirenen'i Kalifornia teraka ny 15 Desambra 1997 tao Los Banos, Kalifornia. Nahazo ny sain'ny firenena i Maude tamin'ny taona 2019 taorian'ny nametrahana azy tao amin'ny andiany fahitalavitra HBO Euphoria.
Maude dia miseho amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra amin'ny maha Lexi Howard, ary nanana fotoana be dia be izy tamin'ny vanim-potoana faharoa, izay mandeha amin'ny alahady alina.
Vokatry ny fiaraha-miasany teo aloha niaraka tamin'i Maude tamin'ny sarimihetsika Assassination Nation tamin'ny taona 2018, dia namorona ny ampahany amin'i Lexi mazava ho azy i Sam Levinson, mpamorona Euphoria.
Inona no tombony azo avy amin'ny Maude Apatow?
Na dia tsy nisy tarehimarika ofisialy navoaka aza, maro ireo famoaham-baovaon'ny haino aman-jery no nitatitra fa i Maude Apatow dia manana tombantombana eo anelanelan'ny $20 sy $35 tapitrisa.
Ny karamany amin'ny maha-mpilalao azy dia fantatra fa loharano voalohany amin'ny fidiram-bolany. Loharanom-bola hafa ho azy ny fanohanana marika sy fanohanana.
Tokyo Revengers Season 2: Daty Famotsorana: Tetika sy ny zava-drehetra tokony ho fantatrao!
Zavatra 10 mahaliana ho fantatra momba ny American Ultra
manamarina ny fizahana raha mpianatra ianao
ny fomba hahazoana kaody karatra fanomezana maimaim-poana
tranonkala tsara indrindra ho an'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra
mijery sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet megavideo
inona no mitranga amin'ny youtube izao
vonoy ny mode safe tumblr chrome